Chelsea Oo Guul Ay Ku Rafaadday Kasoo Gaadhay Brentford, Lana Wareegtay Hoggaanka Horyaalka - GOOL24.NET
Chelsea Oo Guul Ay Ku Rafaadday Kasoo Gaadhay Brentford, Lana Wareegtay Hoggaanka Horyaalka
Chelsea ayaa dib ugu soo laabatay hoggaanka horyaalka Premier League oo ay ka riixatay Liverpool oo maanta si ku-meelgaadh ah u qabatay, kaddib markii ay guul cidhiidh ah kasoo gaadhay Brentford oo ay 1-0 kaga badisay.
Blues ayaa safar gaaban ugu tagtay kooxda ay isku xaafadda yihiin ee Brentford oo kasoo dallacday heerka labaad, waxaana saddexda dhibcood ugu filnaaday gool madi ah oo uu qaybtii hore u dhaliyey difaaca bidix ee reer England ee Ben Chilwell.
Brentford ayaa badhig cajiib ah samaysay, isla markaana laba jeer birta u garaacday Blues, halka uu goolhaye Edouard Mendy dhawr kubbadood oo uu halis ku galay uu ka badbaadiyey.
Bryan Mbeumo ayaa daqiiqaddii 22aad kubbad uu goolhaye Mendy dhaafiyey ka jaray birta, waxaana isla kubaddaas weerar rogaal celis degdeg ah kusoo samaysay Chelsea, waxaana shabaqa Brentford dhex dhigay Romelu Lukaku hase yeeshee waxa lagu qaaday offside maadaama intii aanu Timo Werner soo dhiibin uu kasii horreeyey difaacyada.
Weeraryahanka reer Germany ee Timo Werner ayaa fursad gool loo qaatay ka lumiyey kooxdiisa iyadoo laynka dushiisa uu Lukaku ugu dhiibay kubbad aan cidhiidhi lahayn oo uu lugta midig ku toogtay, balse waxa uu dhinac mariyey birta.
Daqiiqaddii 37aad ayay Chelsea heshay goolkeeda madiga ah oo uu u dhaliyey Ben Chilwell oo kubbad qurux badan ku toogtay goolka, taas oo uu goolhaye David Raya awoodi waayey inuu joojiyo.
Qaybta labaad ayaa Chelsea ku ahayd mid culays badan uu saaran yahay, waxaana uu Thomas Tuchel miciin biday inuu awoodda saaro khadka difaaca.
Bryan Mbeumo ayay mar kale birtu la dagaallantay daqiiqaddii 75aad, isaga oo kubbad uu ku toogtay lugta bidix, isla markaana dhaafiyey goolhaye Mendy ay birta kaga soo dhacday.
Daqiiqaddii 90+3 ayuu Edouard Mendy la baxsaday Chelsea isagoo kubbad halis ahayd uu ka joojiyey Norgaard, sidaas ayaanay Chelsea guushu ugu raacday 1-0.
Chelsea waxay yeelatay 19 dhibcood, waxaanay hal dhibic ka hormartay Liverpool oo 18 dhibcood haysata halka Manchester City ay saddexaad soo cidhiidhsatay oo ay 17 dhibcood haysato.